China Carbide Rotary Burr SD Shape -Ball Shape ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ |ဆင်ဟွာ
Carbide rotary burr ကို carbide high speed cutter ၊ သို့မဟုတ် carbide mold cutter ၊
သတ္တုပြုပြင်ခြင်းနှင့် သတ္တုမျက်နှာပြင် burr polishing များတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။
1. သတ္တုမှိုအပေါက်များကို ပြီးအောင်ပြုလုပ်ရန် ကာဘိုင်ပြားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. carbide rotary burr သည် burrs, burrs and welds of castings, forgings and weldments;
3. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ အတွင်းအပေါက် မျက်နှာပြင်ကို အပြီးသတ်ခြင်း၊
4. carbide burr ကို အမျိုးမျိုးသော သတ္တုနှင့် သတ္တုမဟုတ်သော လက်မှုပညာ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Ball Shape အမျိုးအစား D D0303X03-35313338 X
Q: စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာများကို ရနိုင်ပါသလား။
Q: အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုအာမခံပါသလဲ။
ယခင်- Carbide Rotary Burr SC Shape -Cylinder Shape with Radius End
နောက်တစ်ခု: ကာဗိုက် Rotary Burr SE Shape -Oval Shape